नेकपाले लगायो प्रदेश इन्चार्ज र अध्यक्षको टुङ्गो ! यी हुनेछन् अब इन्चार्ज र अध्यक्ष !
काठमाडौँ, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा)ले सातै प्रदेशका इन्चार्ज, सहइन्चार्ज र प्रदेश संगठन कमिटीका अध्यक्ष र सचिव टुङ्गो लगाएको छ ।
प्रकाशित : शुक्रबार, असोज ०५, २०७५१३:२२
मोदीले नाकाबन्दीबारे क्षमायाचना गर्नु नै उचित – विवेकशील साझा
राउत आज बिहानै मृत अवस्था फेला परे !
मन्त्रीहरुको टुङ्गो लगाउन एमाले स्थायी कमिटी बैठक जारी: मन्त्री छान्न ठूलो सकस